सामाजिक सञ्जालमा चर्चित पाँच मुख्य विषय – केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्तादेखि ‘अघोषित’ लोडशेडिङसम्म – Sulsule
सुलसुले २०७७ पुस २८ गते १७:४० मा प्रकाशित
ट्विटर र फेसबुकका प्रयोगकर्ताले ती विषयमा पक्ष-विपक्षमा भिन्नभिन्न मत व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ।तर्कवितर्क भइरहेकामध्ये पाँच मुख्य विषयलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।
त्यसमा सहभागीमध्ये एक बलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले त्यसप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।ट्विटरमा उनले लेखेकी छन्, “मैले आशा गरेकी थिएँ कि जनताको राष्ट्रिय एकता प्रतिको सामूहिक भावनालाई सरकारले सम्मान गर्नेछ। तर उसको व्यवहार ठिक उल्टो देखियो। पृथ्वीनारायण शाहको सालिकअगाडि नै सरकारको यो आपत्तिजनक कार्य? पानीको फोहोरा र अश्रुग्याससहित प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो?”
चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत उनललाई परीक्षामा सामेल गराउन लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।ट्विटरमा डा. रामेश कोइराला लेख्छन्, “नेपालका सबै मेडिकल कलेजले टेबुल माथिबाटै हाकाहाकी थप पैसा लिन्छन् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। सरकारलाई गोप्य हुन्छ भनेर उजुरी दिएको कुरो हप्ता दिनमा कलेजका साहुकहाँ पुग्छ र विद्यार्थीलाई फेल गर्दिने थप यातना सुरु हुन्छ। देश ठोरीका रामका लागि स्वर्ग हो, वीरगन्जका रामजी रामका लागि हैन।”
पत्रकार अखिलेश उपाध्यायको ट्वीट छ, “यो लोडशेडिङ हैन, टिपिङ मात्र हो। कसले सिकाउँछ यी महान् हस्तीहरूलाई शब्दका भकारी? बत्ती बालिदेऊ भनेका न हुन् जनताले।”(बीबीसी)